सर्पले टोकेमा के गर्ने / के नगर्ने ? जानी राखौ - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»सर्पले टोकेमा के गर्ने / के नगर्ने ? जानी राखौ
सर्पले टोकेमा के गर्ने / के नगर्ने ? जानी राखौ
By रिता घिसिंग on २६ भाद्र २०७५, मंगलवार ०८:२१ स्वास्थ्य/जीवनशैली
एजेन्सी : सर्पले टोक्ने बित्तिकै डराउन हुँदैन । सर्पले टोक्ने बित्तिकै आत्तिनु हुदैन। सर्प र सर्पको टोकाइको तरीकाले विष लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने निक्र्यौल गर्न सकिन्छ । सर्पको विष मांशपेशीबाट रगत हुँदै रगतको माध्यमले मुटु र मस्तिष्कमा पुग्ने हुन्छ । कुनै टोकाई विषालु हुन्छ । कुनैले टोकेको भएपनि विष लाग्दैन । कहिले टोकेको जस्तो लागेपनि टोकेको चाहिँ हुँदैन ।
सर्पले टोकेपछि विष लाग्यो वा लागेन भन्ने कुरा शरीरमा आएको परिवर्तनले पनि जान्न सकिन्छ।
मुखले चुस्ने- सर्पले टोकेको ठाउँमा मुखले चुस्नु चलचित्रमा देखाउँदा मात्रै राम्रो हो । वास्तविक जीवनमा मुखले चुस्यो भने घाउमा किटाणुको संक्रमण हुन्छ ।